Umntu waseLibra kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umntu waseLibra kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide
Umntu waseLibra kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide
Ubudlelwane phakathi kwendoda yaseLibra kunye nomfazi weScorpio bunokuba yinto emnandi, njengoko le miqondiso mibini ikhupha ezona zibalaseleyo komnye nomnye. Unzima, unokuthomalaliswa kuphela yindoda elungeleleneyo eLibra.
Kuyafana nokuba ezi zimbini zenzelwe ukuhlala ibali lothando kunye. Uya kukholisa kwaye uya kusebenzisa ubufazi bakhe ekuphatheni, kwaye uya kuthandana naye ngokupheleleyo.
Iikhrayitheriya I-Libra Man Scorpio yabasetyhini isiDanga sokuNgqinelana
Indoda yaseLibra inethemba kwaye inamandla. Logama uqhubeka nokutyhalela phambili, uya kuphumelela ebomini. Ngamanye amaxesha, xa ediniwe, uyonqena kakhulu. Into ayifunayo kukuphumla aze achache.
ILibras yaziwa ngokuthintela ukungqubana kodwa ihlalutye omabini amacala engxaki ngaphambi kokwenza uluvo. Indoda yaseLibra iya kuthanda ubukrelekrele nobulumko bomfazi weScorpio. Uya kuhlala ebuza uluvo lwakhe.
Eli nenekazi liyazi indlela yalo. Unamaqhinga akhe aya kuthi amthande ngokupheleleyo.
Ayisiyiyo eyothando kakhulu kubo bonke abafazi kwi-zodiac, inenekazi leScorpio lisaya kuba nakho ukuphinda luthande uthando kunye nendoda yaseLibra. Ummangaliso, uya kumrhwebesha ngomzuzwana. Bobabini baya kufuna ukuzibandakanya
Xa bedibana, uya kugcina ezinye izinto ngobuntu bakhe zifihliwe, eziza kumenza umdla kakhulu. Uya kuba nomdla kubukrelekrele bakhe nomtsalane. Okukhona eya kumazi, kokukhona uya kufuna ukufumana ngaye.
Uneminqweno emihle kwaye uyanelisa, unzulu kwaye uyakhawuleza. Ngokudibeneyo, banayo yonke into abayifunayo kulwalamano oluhle. Ukungathethi ke baya kufunda izinto ezininzi omnye komnye.
Uhlalutya zonke iinkalo zengxaki ngaphambi kokufikelela kwisiphelo. Unokumfundisa ngeendlela zakhe, kwaye angambonisa indlela yokuzibophelela kwinto ayithandayo.
Ebhedini, umfazi weScorpio uya kufuna ukulawula indoda yaseLibra. Ngelixa efuna izinto zithandane ngakumbi, uya kungxama ngakumbi. Bayokonwabela uthando lomnye nomnye, ngaphandle kwento yokuba baneendlela ezahlukeneyo.
Uya kuqonda ukuba unamaxesha xa onwabile kunye namaxesha xa eziva ephantsi. Kodwa usazomthanda kakhulu.
Xa efuna into kuye, angasebenzisa ikhubalo lakhe, kodwa angaphumeleli. Nangona kunjalo, uya kuyazi indlela yokweyisela kunzima ukwala iScorpio.
Ngenxa yokuba indoda yaseLibra ihlalutya kakhulu kwaye umfazi weScorpio ephindezela kakhulu, aba babini banokuba neengxaki njengesibini.
Ngamanye amaxesha angacinga ukuba unethemba kakhulu okanye akazithembi, nto leyo eza kumenza ahlalutye imeko abakuyo ngokunzulu. Banokulwa kwaye batyhile amacala abo anobundlongondlongo, ngakumbi umfazi weScorpio.
Kodwa ayizukukhathalela ukuba baya kuba nomoya okanye bacaphuke kangakanani, aba babini baya kusombulula nayiphi na ingxaki abanokuba nayo ngokufudumala kunye nomtsalane. Unokuqonda ukuba unomsindo xa izicwangciso zakhe zingaphumeleli. Kwaye uzolile xa kufikwa kwesinye isiqingatha sakhe.
Eli nenekazi liya kulinda indoda yalo yeLibra ukuba ibe nobuchule kwaye iphinde ibe nesilumko, kwaye konke oko kuyakufaneleka kuba ulwalamano lwabo luya kukhula lomelele.
Xa evulekile kakhulu ngento ayinqwenelayo okanye ayithiyileyo, uya kumangaliswa kakhulu xa embona ecacisa.
ILibra konke malunga nobulungisa kunye nokulingana. Ukuba indoda ekulo mqondiso ibona into engalunganga, iya kuba nexhala kakhulu kwaye yoyike.
Ngamanye amaxesha, umfazi weScorpio unokuba krakra nendoda yakhe yaseLibra. Oku kunokwenzeka xa esonqena kakhulu. Akayi kuhlala esonwabela ukulawulwa nguye.
Kwaye awusoze ubone umfazi weScorpio enika ulawulo analo. Kuphela ukuba uqinisekile ukuba uneengcinga ezingcono, uya kwamkela ukuba woyisiwe.
Uya kwenza nantoni na ukumonwabisa. Kwaye xa engonelisekanga, uya kuziva ekhathazekile. Ukuba ufuna ubudlelwane obulungileyo, kufuneka afane naye xa kufikwa ekugcineni omnye umntu onwabile.
Ukuba yindoda yokuqala yaseLibra kunye nomfazi wokuqala weScorpio, aba babini banokonwaba kakhulu.
Kuya kumthatha iminyaka ukuqonda ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa ubuqhetseba. Kwaye kuyafana naye. Uya kuthatha phantse ngonaphakade ukumbona engathandi ukuba kwiimbambano kunye nokungcolisa izandla zakhe.
Kodwa kuzo zonke, zenza isibini esitshatileyo esihle kunye nabazali abagqibeleleyo. Abantwana babo baya konwaba. Uya kuthakazelelwa ngokupheleleyo yimfihlelo emngqongileyo, ngelixa eya kuthi atsalwe kukuzola kwakhe ngaphezu kwayo nayiphi na into.
Ngamanye amaxesha bayaphikisana njengobuntu, aba babini banokutsala kakhulu omnye komnye. Uyakuthanda ukuchitha ixesha lakhe yedwa, uyibhabhathane ekuhlaleni elifuna ukuphuma kangangoko.
Indoda yaseLibra ijonge ukuvunywa kwabanye kuyo yonke into. Xa efuna ukulwa, uya kubaleka ngokukhawuleza okukhulu.
Ingcebiso yokugqibela yeNdoda yaseLibra kunye noMfazi weScorpio
Ukuba indoda yaseLibra ifuna ukufumana umfazi weScorpio, kufuneka abe nomtsalane kwaye aziphathe kakuhle. Abafazi beScorpio bathanda inene eliyinyani.
Ngelixa elinde yena ukuba amnike imvume kubudlelwane babo, angamnika zonke iintlobo zezipho zothando. Uyakuchukunyiswa zizimbo zomzimba ezimnandi, naye. Ngokubanzi, uya kuthanda yonke into ebonisa ukuba ungoyena mntu ubalulekileyo kuye.
Ukuba bafuna izinto phakathi kwabo ziguquke kakuhle, aba babini kufuneka baxhasane kangangoko. Ayizukubaluleka ukuba zizinto zokuzonwabisa okanye ikhondo lomsebenzi, kufuneka babekhona omnye komnye.
Yinto entle ukuba bobabini bafuna ubudlelwane bexesha elide, oluthembekileyo. Umfazi weScorpio unamandla ngakumbi. Kodwa oku akuyi kuba yingxaki nje ukuba babonisa inhlonipho, uthando kunye nokuqwalaselwa.
Kuba bakholelwa ekulinganeni, aba babini baya kuba nolwalamano olulinganayo. Amandla abo ahlukeneyo aya kudibana kumdaniso omhle wokubukela. Xa eziva edanile, uya kuba lapho ukuze amthuthuzele.
Zonke iingxaki azakuzisa kuye ziya kusonjululwa ngokusengqiqweni nangengqondo ecacileyo- kwaye uyakuyixabisa kwaye uyithande loo nto, kuba inokuba neengxaki ezininzi.
Uya kuchukunyiswa yimvelo yakhe kunye nendlela yakhe yokubona ngabantu. Ixesha elininzi abalichitha kunye, kokukhona baya konwaba ngakumbi njengesibini.
ILibra luphawu oluqinisekileyo loMoya, ngelixa iScorpio sisisigxina samanzi. Oku kuthetha ukuba baneempawu ezahluke kakhulu. Apho umfazi weScorpio enobumnene kwaye enomona, indoda yaseLibra iyathandana kwaye ivulekile kuwo wonke umntu. Ufuna ukuhlala eqinisekiswa ngothando lwakhe, kufuneka azi kuphela ukuba ukhona.
Kuyacetyiswa ukuba anelise zonke iimfuno zakhe zeemvakalelo. Kufuneka aqonde ukuba kufuneka azithathele ingqalelo iingxaki kwaye acinge ixesha elide, nokuba wahluke kakhulu kuye. ILibras iqhubela phambili ngokukhawuleza xa iphantsi.
Kukwacetyiswa ukuba ugcina ubudlelwane bunomdla kwaye budlamkile. Kufuneka akhuthazwe ukuba uza kuhlala ixesha elide ecaleni komfazi. Ngelixa banokuba nokungafani okuninzi, aba babini banethuba elihle lokuba sisibini esonwabileyo.
Kodwa kuyakufuneka basebenze nzima kwaye bamkele ukuba abafani, kwaye umgudu kufuneka uvele macala omabini. Ulonwabo alunakufunyanwa ukuba ngaba omnye wabo uzama ukwenza izinto zibengcono.
Iimpawu zoLuntu waseLibra othandweni: Ukusuka ekungazinzini ukuya kwiCharming emangalisayo
Abadlali beLibra Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
I-Scorpio Soulmate: Ngubani Olilungu loBomi Babo?
ILibra kunye neScorpio ukungqinelana kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Indoda yeLibra enezinye iimpawu
Umfazi weScorpio Olunye uphawu
Iimpawu eziphambili zenyoka yaManzi yaseTshayina yeZodiac
Indoda yoMhlaza: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
uqhuba njani umntu ofezela i-scorpio ebhedini
loluphi uphawu ngumatshi wesibini
loluphi uphawu oluku-matshi 13
Uphawu lweZodiac nge-10 ka-Okthobha
Ilanga kwi-taurus inyanga kumhlaza